Fihetsiketseham-Panoherana 10 Voalohany ao Shina Nalahatry ny Vaovaon'ny Tencent	Voadika ny 03 Janoary 2013 4:12 GMT
Zarao: Nivoaka tao amin'ny Vaovaon'ny Tencent, tranokalam-baovao shinoa an'ny orinasan'aterineto be mpanjifa indrindra ao Shina antsoina hoe Tencent, tamin'ny 30 Desambra 2012, ny fihetsiketseha-panoherana folo lehibe indrindra tao Shina tao anatin'ny roa taona. Na dia vetivety aza dia voasivana tao amin'ny vohikalam-baovaon'ny Tencent ity lahatsoratra ity, dia nalaza vetivety ny tany amin'ny tambajotram-piarahamonina sy ny tontolon'ny bilaogy shinoa ny teny fohy fampidirana tao aminy. Vantany vao nizara [zh] ny lahatsoratra tamin'ny endriny voalohany ny mpiserasera Qian Hao shared [zh] tamin'ny voalohany Janoary 2013, dia 4653 no isan'ny nampita ilay lahatsoratra ary 500 ny naneho hevitra tao anatin'ny ora vitsy monja. Nitehaka tamin'ilay tantara ny mpiserasera.
3) Olo-pirenen'i Hong Kong: Manohitra ny Fanabeazana “Manasa Ati-doha” Nametraka drafitra ny tsy maintsy hanaovana ny fanabeazana fitiavan-tanindrazana any an-tsekoly ny governemanta tao Hong Kong saingy niteraka fanoherana faobe teo amin'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny nihevitra izany ho “fanasana ati-doha” izany. Nofoanan'ny governemanta moa izany tamin'ny farany.
Fahalalahàna mitenyFanoheranaHafanàm-po nomerikaMediam-bahoakaPolitikaZon'olombelona